[ June 20, 2021 ] टिकटकमा बुढी आमा बनेर भाइरल नानीको घरमा पुग्दा, सबैलाई पारिन् दगं – हे’र्नुहोस अचम्मको प्रतिभा समाचार
[ June 20, 2021 ] अब यातायात व्यवस्था विभागले दुई प्रकारको सवारी लाइसेन्स वितरण गर्ने समाचार
Homeसमाचारमुलुकभर आज थपिए ९ हजार २४७ कोरोना सं’क्रमित, २१४ को मृ’त्यु
May 17, 2021 admin समाचार 973
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपा’लमा ९ हजार २ सय ४७ कोरोना संक्र’मित थपिएका छन् । त्यस्तैगरी पछिल्लो २४ घण्टामै २ सय १४ को कोरोना संक्रमणबाट मृ’त्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै आज ५ हजार ७ सय ६७ संक्र’मितले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् ।
संक्रमित र मृ’त्यु हुने दुवै संख्या आइतबार (हिजो)को तुल’नामा बढी हो । आइतबार मुलुकभर ७ हजार ३ सय ६८ जनामा कोरोना संक्र’मण पुष्टि भएको थियो । त्यस्तै १४५ को कोरोना संक्र’मणबाट मृ’त्यु भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सर’कारका नवनियुक्त दुई मन्त्रीले शपथ लिनुभएको छ । दुवै मन्त्रीलाई आज प्रदेशप्रमुख गोविन्द्र’प्रसाद कलौनीले शपथ गराउनुभएको हो ।
नवनियुक्त आन्त’रिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूदमन्त्री सीता नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनी’यताको शपथ लिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुखको का’र्यालयले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ र धारा १७० को उपधारा १ बमोजिम आइतबार साँझ मन्त्री नियुक्त गरेको थियो ।
आन्तरिक मामि’लामन्त्री नेपाली र आर्थिक मामिलामन्त्री शर्माले आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रा’लय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैँले सम्हाल्नु’भएको छ । न्युज24 बाट
August 18, 2020 admin समाचार 16924
December 11, 2020 admin समाचार 3971
April 4, 2021 admin समाचार 1778
अब यातायात व्यवस्था विभागले दुई प्रकारको सवारी लाइसेन्स वितरण गर्ने
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (193744)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (186341)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (185868)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (185801)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (183972)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (183752)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (182313)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (181407)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (175007)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151605)